सोसल मिडियामा भाइरल बनेको यो तस्बिर, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय एउटा तस्विर निकै भाइरल बनेको छ। उक्त तस्विरमा बच्चाहरुले सेल्फी लिइरहेको कल्पना गर्दै खुसी भइरहेको देख्न सकिन्छ।
यो तस्बिरलाई फोटो अफ द डे, बेस्ट सेल्फी, ह्याप्पीनेसजस्ता शब्द प्रयोग गरेर सेयर गरिँदै छ। यतिमात्र होइन, यो तस्बिरलाई बलिउड सेलिब्रिटीले निकै सेयर गरिरहेका छन्।
फेसबुक, इन्ट्रग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । यो फोटो कहाँको हो ? खुलाइएको छैन् तर भारत को कुनै ठाउँको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। इन्टा«ग्राममा
अनुपम खेरले यी तस्बिर सेयर गर्दै लेखेका छन्, ‘जो व्यक्ति कुनै पनि कुरालाई राम्रो तरिकाले लिन्छन्, उनीहरुका लागि सबै कुरा उत्कृष्ट हुन्छ। यो क्याप्सनसहित अनुपम खेरले केही ट्याग पनि लेखेका छन्। यस्तै अन्य कलाकारहरुले पनि फोटो सेयर गरेका छन्।
“Things turn out best for the people who make the best of the way things turn out.”:) #Attitude #Innocence #HeartWarming #SelfieWithAFootwear #SomewhereInIndia #PicOfTheDay
A post shared by Anupam Kher (@anupampkher) on Feb 3, 2019 at 9:02am PST
A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol) on Feb 3, 2019 at 9:16am PST